Ndị na-emepụta ọkụ eletrik, ndị na - enye ọrụ - China Power Supply Factory
Net nha: 63.3g Size: 75mm (ogologo) * 32mm (obosara-ọkpụrụkpụ) * 55mm (elu) Mbukota: elu na ala mkpuchi igbe + ike ụdọ Agba: gold, red, nwa oke: 1. Interface: DC + RCA interface 2.Material: alloy alloy 3. Batrị Lithium: 3 550 mAh batrị lithium 4. Oge nkwụ ụgwọ: ụgwọ ngwa ngwa, oge 1.5-2 nwere ike ịkwụ ụgwọ zuru oke 5. Oge bara uru: n'okpuru volta 10V nkịtị, volta anụ nwere ike ịdịgide ruo awa 4. , n'okpuru voltage 8V, enwere ike iji ya rụọ ọrụ karịa awa 4, voltaji ahụ kwụsiri ike; Ins ...
Abụọ Control esdị Digital Power iyi maka Tattoo igwe Multifunctional Red Skull Tattoo Power Tụkwasịnụ 1. Ike ọkọnọ nwere oge oge, pịa ka ịtọ mmalite ma kwụsị, ogologo pịa sekọnd atọ ka nhicha efu 2. Site na mgbakwunye na mwepu bọtịnụ, ogologo pịa nwere ike na-agbakwunye ma wepu voltaji. 3. Nwere ogologo nzọụkwụ na jog sọrọ mode ịgbanwe. 4. Enwere ike ịtọ bọtịnụ anọ iji chekwaa ọrụ nke voltage nke anọ. 5. Dual mode ntụgharị 6. Ọrụ ebe nchekwa 7. Oge ọrụ MOLONG TATTOO SU ...
Elu àgwà Pụrụ Iche Tkpụrụ Tattoo Power non-ileghara Multifunctional Digital Tattoo Power Tụkwasịnụ
Aha aha: ike a pịrị apị Ihe: zinc alloy Agba: Gold / Grey / Sliver Gross Weight: 850 g Nrụpụta ugbu a: 3.4 Volta nke mmepụta: 0-18 V Ngwa: 1 nkwụnye, 1 ike ụdọ Ntuziaka maka iji: 1. Nrụpụta voltage bụ 0-18V, mezie voltaji site na isi; 2. Ihe mmepụta nke ugbu a bụ 3.4 amperes; 3. E nwere ike ijikọta igwe egbugbu abụọ, otu na-arụ ọrụ ma nke ọzọ nọ na njikere. Pịa ma jide okpukpu abụọ maka sekọnd 2 ka ịgbanwee, na akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke kwekọrọ ...
Nha ngwaahịa; 7.5 * 7.5 * 4.5cm Nha igbe; 17.5 * 11.5 * 8cm Net arọ; 178g Gross ibu; 416g Nkọwapụta ngwaahịa: inye ike + nkwụnye + nkwụnye ngwaahịa ntuziaka: 1: Nweta ike nke oriọna egbugbu nwere agba asaa, mmalite igodo, enweghị pedal dị mkpa, dịkwuo mfe na ngwa ngwa. 2: Bugharia aka ekpe na aka nri iji gbanwee volta, agba ọkụ dị iche iche na-anọchi anya ụkpụrụ voltage dị iche iche. 3: Rubber non-slider base, magnet wuru n'ime ya, mmiri dị ike, kwesịrị ekwesị maka ebe dị iche iche. 4: ọmarịcha lantern imewe, ...
Ike Locomotive Digital Dual na ngosi LCD
Digital sọrọ igwe igbu ike ọkọnọ na LCD ngosi. Na-enye ike ma kwụsie ike ugbu a iji rụọ ọrụ igwe egbugbu. Performancerụ ọrụ ọma na ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-akwado ogologo oge na-arụ ọrụ. Ngosipụta LCD gradient, dị mfe ịgụ mgbe ị na-arụ ọrụ. Adaba bọtịnụ maka njikwa ọsọ. Ngwugwu Gunye: 1 x Tattoo Igwe Ike Nweta 1 x Power Plug (dabara maka mba gị) companylọ ọrụ anyị nwere ọkachamara na egbu egbu ọtụtụ afọ, na-enye ụdị akụrụngwa ọkachamara dị elu, ụdị egbugbu ...
Digital isi iyi Standard Standard nkenke HP-2 attdị Ike Tụkwasịnụ
Dakọtara na igwe eji arụ ọrụ na igwe eji arụ ọrụ, ọ na - arụ ọrụ nke ọma, na - enweghị nsogbu ma na - enweghị akara. Enwekwara ya ihe nkwonkwo aluminom dị elu, iko mmiri, na ihe ndozi ígwè magnetik, nke nwere ike ịbịnye ya na tebụl ọla. Atụmatụ: Njikwa microprocessor zuru oke, dị mfe iji. Ọma ndozi nke set mgbe voltaji 0-18vdc. 2.3 Ampere wuru-overload nchedo iji hụ na nchekwa nke igbu egbugbu. Liner / Shader ugbu a preset na 2 igwe ma ọ bụ 4 mach ...